Oktoobar | 2007 | WEEJIDOW
Oktoobar 31, 2007
Xoghayihii maamulka deg. H/wadaag oo cabsi darteed isku casilay.
Xoghayihii guud ee maamulka degmada H/wadaag ee gobolka Banadir Khaliif Cali Faarax oo la soo xiriirey idaacadda Shabelle ayaa iska casilay xilkii uu ka hayay maamulka degmada H/wadaag ee gobolka Banadir sababo dhinaca amaanka ah.Sababaha uu isku casilay xoghayihii maamulka degmada H/wadaag Khaliif Cali Afrax ayaa waxa uu ku sheegay in lagu soo wacay taleefano looguna sheegay in xilka uu ka tago haddii uu diidana ay saameyn ku yeelan karto noloshiisa.
Waxa uu sheegay in uu jiro waqto loo qabtay oo ku eg 7da fiidnimo ee caawa cadeeyana in uu xilka ka tago.
Waxa uu sheegay in aanu jirin wax naftiisa kaga qaalisan oo uu ku doorsanayo taasina ay keentay in uu xilka isaga tago.
Waxa uu sheegay in is casilaaddiisa aanu gaarsiin maamulka degmada H\_wadaag iyo kan gobolka.
Horey waxaa isku casilay xubno ka tirsan maamulka dowladda gaar ahaan garsoorayaasha magaalada Muqdisho qaar inkastoo bilihii la soo dhaafay la dilay qaar ka mid ah maamulada degmooyinka gobolka Banadir.
Ku dhowaad 40 kun oo ruux oo ka barakacday mag. Muqdisho todobaadkaan
Hay’adda Q.M u qaabilsan arimaha qaxootiga ayaa sheegtay in ilaa 40 kun oo ruux ay ka barakaceen dagaaladii ka dhacay magaalada Muqdisho 3 dii maalmood ee la soo dhaafay.Hay’adda UNCHR war bixin ay soo saartay ayaa waxa ay ku sheegtay in dad kor u dhaafaya 40 kun oo ruux ay ka barakaceen magaalada Muqdisho ka dib markii dagaalo culus ay ka qarxeen casimadda, dagaaladaasi oo hay’adda ay ku tilmaamtay kuwii ugu xumaa bilooyinkii la soo dhaafay oo dhex maray ciidamada Ethiopia oo kaashanaya kuwa dowladda iyo xoogagga ka soo horjeeda.
Hay’adda ayaa waxa ay sheegtay in inta badan dadkaka barakacay magaalada Muqdisho ay u jiheysteen dhinaca degmada Afgooye iyo deegaanada ku xeeran, taasi oo horey ay ula daalaa dhaceysay in ay aqbasho ku dhowaad 100 kun oo ruux oo ka barakacay magaalada Muqdisho oo horey halkaasi ugu sugnaa.
Afhayeenka hay’adda UNCHR Jenifer Bejunes ayaa war saxaafadeed ay ka soo saartay waxa ay ku sheegtay in dagaalada ka qarxay magaalada Muqdisho todobaadkaan horraantiisii ay sababeen mowjado hor leh oo barakac ah, waxaana ay sheegtay in dad kor u dhaafaya 36 kun oo ruux ay guryahooda ka carareen 6 dii maalmood ee la soo dhaafay.
Waxa ay intaasi ku dartay in shaqaalaha gargaarka ay ku tilmaameen dagaaladii ka dhacay Muqdisho todobaadkaan kuwii ugu xumaa.
War bixinta UNHCR ayaa waxa ay intaasi ku dareysaa in 400 kun oo ruux ay magaalada Muqdisho ka barakaceen bilihii aynu soo dhaafnay, iyadoo 125 kun oo ruux ay dib u soo laabteen, hasa yeeshee dagaaladaan ka soo cusboonaaday magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sababeen barakac hor leh oo gaaraya ilaa 40 kun oo ruux.
Boqolaal ka tirsan dadka ka barakacay shaqaaqooyinka Muqdisho oo maanta dibad bax cabasho ah ka sameeyey deegaanka Siinka dheer
Dad kor u dhaafaya ilaa 700 boqol oo qof oo ka mid ah dadweynaha ka barakacay dagaalaada iyo shaqaaqooyinka ku dhexmarayey bilihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Itoobiya oo dhinac ah iyo kooxaha ka soo horjeeda ayaa maanta dibed baxyo ay uga cabanayaan xaaladooda nolooleed oo aad u sii adkaaneysa waxay ka dhigeen deegaanka Siinka dheer oo ku yaala inta u dhexeysa magaaladan Muqdisho iyo degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose.
Dadkan oo isugu jiray haween caruur iyo dad dhalinyaro ah ayaa ku qeylinayey ereyo ay ku tilmaamayaan dhibaatooyinka heysta oo ay sheegeeni iney yihiin kuwo aad u ba’an gaar ahaana cunto la’aan biyo la’aan iyo hoy xumo ay xuseen iney halkaasi ku heysato, waxayna ku eedeeyeen hey’adaha samafalka ee jooga Soomaaliya iney wax muuqda oo la taaban karo ka qabanin dhibaatooyinka halkaasi ku heysta.
Dadweynahan ayaa ugu dambeyntii ka dalbaday hey’adaha caalamiga iyo dowladaha Adduunka iney la soo gaaraan gargaar deg deg ah oo bani’aadamnimo, kaasoo ay sheegeen iney si aad ah ugu baahan yihiin waxayna tilmaameen in dhibaatooyinka heyasta ay ka mid yihiin cudurada faafa iyo kuwa ka dhasha nafaqo darida oo ku habsaday caruurta iyo dadka waaweyn waxeyna sidoo kale ka dalbadeen dowlada federaalka Soomaaliya iney cadaadiska ka qaado hey’adaha doonaya iney caawiyaan iyaga ee jooga Soomaaliya.
Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ka yeelanaya qodob ahmiyad u leh Ra’iisul Wasaaraha Cusub.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta fadhi xasaasi ah ku yeelanaya Magaalada Baydhabo, kaasoo ah qodobadii lagu heshiiyay Shirkii Dib u Heshiisiinta qaran ee Muqdisho ku dhamaaday, kaasoo la doonayo in Baarlamaanka ansixiyo.
Xildhibaanada ayaa maanta wajahaya qodob muran weyn keeni kara, kaasoo ahmiyad u leh Magacaabida Ra’iisul Wasaare Cusub oo sida la sheegayo banaanka laga keenayo.
Dooda Mudnayaasha aaya noqoneysa waxyaabihii ka soo baxay shirkii dib u heshiisiinta Beelaha Soomaalida ku yeeshay Magaalada Muqdisho kaas oo uu hoggaaminayay Cali Mahdi, iyadoo shirkaas qodobada ka soo baxay uu ka mid yahay qodob ku talinaya in dibada laga keeni karo Golaha wasiirada oo hada ka yimaada baarlamaanka oo kaliya laga keeni karo ka bannaanka Baarlamaanka.
Wararka ayaa sheegaya in laga yaabo in xubnaha Baarlamanka dood kulul ka yeeshaan qodobkan, iyadoo ay jiraan xildhibaan ka biya diidan qodobkaas.
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya C/llaahi Yuusuf Axmed ayaa qorsheynaya in Ra’iisul Wasaaraha cusub ee bedeli doona Ra’iisul Wasaarihii hore ee xilka iska casilay uu ka keeno bannaanka ama dibadda halka markii hore Wasiirada laga soo xulayay gudaha Baarlamanka.
Si kastaba ha ahaate waxaa la arki doona sida ay xubnaha Baarlamaanka uga hadlaan qodobkaas oo Muhiim u ah Madaxtooyada Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Prof. Geeddi oo maanta kula kulmaya Magaalada Nairobi Safiirka Mareykanka u fadhiya Kenya
Ra’iisul Wasaarihii Soomaaliya Prof. Cali Maxamed Geeddi ayaa saacadaha soo socda kulan xasaasi ah kula yeelanaya Magaalada Nairobi Safiirka Mareykanka ee u fadhiya Kenya Michel Ranniberger.
Cali Geeddi oo labo maalmood ka hor iska casilay xilkii Ra’iisul Wasaarenimada Soomaaliya ayaan la ogeyn waxa uu xilligan kala hadlayo Safiirka Mareykanka.
Is Casilaadii uu ku dhawaaqay Geeddi ayaa aheyd mid ka timid dhinaca Mareykanka oo sida la sheegayo cadaadis xoogan ay ku saartay, balse waxaa la tilmaamayaa inuu jiro is faham hoose oo dhex maray Mareykanka iyo Cali Geeddi.
Wararka ayaa waxay sheegayaan in Cali Geeddi loo balan qaaday magangalyo siyaasadeed isaga iyo qoyskiisa, waxaana warar ku dhow dhow Geeddi ay sheegayaan in laga yaabo in Dalka Mareykanka uu u dhoofo.
Qaban qaabada Kulanka maanta uu la yeelanayo Cali Geeddi safiirka Mareykanka ayaa ka soconeysa Xarunta safaarada mareykanka ee Nairobi, sida ay sheegayaan wararka halkaas aanu ka heleyno.
Prof. Geeddi oo qasri weyn ka iibsaday Magaalada Nairobi intii uu ahaa Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa halkaas maalmahan kulamo kula qaadanayay Siyaasiyiin iyo diblomaasiyiin shisheeye, isagoo warbixino ka siinayay mustaqbalkiisa siyaasadeed.
War Deg Deg ah: Labo ruux oo ku geeriyootay Qarax iyo israsaaseyn ka dhacday maanta Magaalada Muqdisho.
Hal qof ayaa ku geeriyooday mid kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray qarax ka dhacay guri ku yaala agagaarka warshaddii hore ee Baastada ee magaalada Muqdisho, iyadoo dhinaca kale qof rayid ah uu ku geeriyooday iska horimaad ka dhacay suuqa xoolaha ee degmada Heliwaa.Sida uu Shabelle u sheegay Goobjooge la yiraahdo Cabdi Xasan Ciise, Qarax xoogan ayaa mar qura laga dhex maqlay guri ku yaala inta u dhaxeysa Ceymiska iyo warshaddii Baastada, gurigaasi oo dadkii daganaa ay horey uga qaxeen.
Lama oga wali waxa uu ahaa qaraxaasi oo si weyn u gil gilay halkaasi.
Qofka geeriyooday iyo qofka dhaawacmay oo ahaa rayid ayaa waxaa la tilmaamay in ay marayeen wadada, waxaana meydka qofka geeriyooday uu noqday cad cad.
Inta badan dadka rayidka ah ayaa dhibaato ay ka soo gaartaa walxaha qarxa ee looga tago wadooyinka iyo waliba xaafadaha.
Dhinaca kale hal qof ayaa ku geeriyooday mid kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray israsaaseyn maanta ku dhex martay suuqa xoolaha ciidamada Ethiopia oo kaashanaya kuwa dowladda iyo kooxaha ka soo horjeeda sida ay ku warameen dadka deegaanka.
Warar ayaa waxa ay sheegayaan in sidoo kale labada dhinac ay kala gaareen qasaaro wali aan la ogeyn wali.
War Deg Deg ah: Wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka Arrimaha Dibadda Itoobiya oo Baydhabo gaaray
Wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Bay ayaa waxay sheegayaan in uu goor dhaweyd halkaas gaaray Wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka Arrimaha Dibadda Itoobiya Seyoum Mosfen. Wafdigaas oo uu ka mid yahay Wasiirka Dalxiisa Itoobiya Maxamuud Dirir ayaa haatan waxay kulamo kula leeyihiin Magaalada Baydhabo Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya C/llaahi Yuusuf Axmed oo isagu ku guda jira todobaadyo uu ka fiirsanayo mas’uulkii uu u magacaabi lahaa Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya. Wafdigan ka socda Dowladda Itoobiya ayaa dhowr jeer oo hore waxay Baydhabo u tageen sabab la xiriirta khilaaf soo kala dhexgalay madaxweyne C/llaahi Yuusuf Axmed iyo Ra’iisal Wasaarihii hore ee Soomaaliya Prof. Cali Maxamed Geeddi, kuwaasi oo khilaafkii ugu dambeeyay oo dhexmaray uu keenay in uu is-casilo Prof. Geeddi. Is-casilaadda uu sameeyay Ra’iisal Wasaare Cali Maxamed Geeddi oo la rumeysan yahay in ay ka dambeysay Beesha Caalamka, gaar ahaan Dowladaha Mareykanka iyo Itoobiya ayaa haatan wuxuu socdaalka wafdigan ka socda Dowladda Itoobiya ku soo beegmayaa iyadoo la sheegayo in uu madaxweyne C/llaahi Yuusuf ka wado Magaalada Baydhabo la-tashiyo ku saabsan Ra’iisal Wasaaraha uu soo magacaabayo. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxay qabaan in haddiiba is-casilaadda Ra’iisal Wasaarihii hore ay ka timid Dowladahaas ay hadana lug ku yeelan doonaan soo magacaabista Ra’iisal Wasaaraha cusub ee Soomaaliya, hayeeshee la arki doonee sida ay wax noqdaan todobaadyada soo socda.
Muqdisho oo aanay iska hor imaad iyo qaraxyo aanu ka dhicin wixii ka dambeeyay is casilaadii barqanimadii shalay uu ku dhawaaqay Ra’iisul Wasaarihii Soomaaliya.
Oktoobar 30, 2007
Iyadoo saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ay Xaalada Muqdisho aheyd mid aad u kacsan, isla markaana iska hor imaadyo xoogan ay jireen, ayaa mar qura degenaansho laga dareemay Magaalada wixii ka dambeeyay is casilaadii shalay ee uu ku dhawaaqay Ra’iisul Wasaarihii Soomaaliya Cali Geeddi.
Dadka odorasa Siyaasada ayaa saadaal kala duwan ka bixinaya degenaanshaha guud ee Magaalada Muqdisho 12-kii saacadood ee la soo dhaafay, waxeyna dadku yihiin kuwo xaaladahan iyo is casilaada Geeddi ay ku wada tilmaamayaan kuwo is wato.
Kooxaha ka soo horjeeda Siyaasada Dowladda iyo joogitaanka Ciidamada Ethiopia ayaa saddex maalmood iska caabin xoogan kula jira Ciidamada Dowladda iyo kuwa Ethiopia, iyadoona iska hor imaadyadaas ay sababeen dhimasho iyo dhaawac iyo barakac dad hor leh in ay ka sameeyaan Xaafado ka tirsan Muqdisho.
Xukuumadii uu Cali Maxamed Geeddi ayaa lagu eedeynaya wax ka qabasha la’aanta Kooxaha kacdoonka oo kordhiyay weerarada ay ku qaadaan Mas’uuliyiinta Dowladda, waxaa kaloo sii dheer ammaan darada ka jirta Caasimada oo aanay Dowladdu wax ka qaban.
Siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku nool Caasimada ayaa sheegay in aysan wax micno ah soo kordhineyn is casilaada Geeddi, laakiin waxa ay sheegeen in ay dhici karto in rabshadihii ka socda Caasimada ay noqdaan kuwo istaaga.
Meelaha Rabshadaha ugu xoogan ay ka aloosan yihiin waa K/Muqdisho oo ay ku badan tahay mid ka mid ah Beelaha waa weyn ee Hawiye, gaar ahaan Beesha H/gidir.
Laakiin dadka qaarkii ayaa sheegay in is casilaadii Geeddi oo ka soo jeeda Beesha Abgaal ay wado u fureyso in laga samata baxo xaaladaha cakiran ee ka jira inta badan K/Muqdisho oo ay degan yihiin Beesha H/gidir oo loolan xoogan kala dhaxeeya Beesha uu ka soo jeeday Cali Maxamed Geeddi ee ah Beelweynta Abgaal.
War deg deg ah: Baabuurta aan ruqsada ka haysan Wasaarada Gaadiidka DFKM oo lagu xanibay Magaalada Baydhabo
Baydhabo:-Ciidamada DFKM ee Magaalada Baydhabo ayaa maanta bilaabay in gaadiidka aan warqada ruqsada ah ka haysan wasaarada gaadiidka DFKM u diidaan in ay soo galaan ama ka baxaan magaalada Baydhabo ka dib markii ay dhamaatay mudadii 3da bilood ahayd ee loo qabtay in gaadiidka isku diiwaan geliyo.
3 bil ka hor ayay ahayd markii wasaarada gaadiidka DFKM ay soo saartay amar 3 bil u qabanaya in shacabka Soomaaliyeed iyo masuuliyiinta DFKM ku diiwaan geliyaan gaadiidkooda si ay u qaataan warqada ruqsada iyo taargada iyo leesinka la siinayo wadayaasha gaadiidka.
Madaxa guddiga nabad gelyada magaalada Baydhabo C/nuur Maxamed Cali ayaa sheegay in amarkan lagu xanibay gaadiidka aan ruqsada ka haysan wasaarada gaadiidka uu ka soo baxay xafiiska wasiirka gaadiidka DFKM Maxamed Ibraahim Xaabsade isagoo tilmaamay in ayagu ay leeyihin meel marinta amarkaasi.
Amarkan ayaa saameyn ku yeeshay gaadiid fara badan oo xamuul u siday gobollada Koonfureed ee dalka Soomaaliya kuwaasi oo loo diiday in ay ka baxaan Magaalada Baydhabo ayadoo gaadiidkii ruqsada aan haysan laysugu geeyay Garoonka Kubada Cagta ee Dr Ayuub Staduim.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Oktoobar, 2007.